Saturday April 27, 2019 - 13:53:03 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa bilaawday in hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ay ku shiriso magaalada Nairobi ee dalka Kenya xilli uu sare usii kacay khilaafka u dhaxeeya dowladda Farmaajo iyo maamul goboleedyada.
Kulamo siyaasadeed oo ka dhan ah xukuumadda Kheyre ayaa isbuucii lasoo dhaafay ka bilaawday magaalada Nairobi waxayna kulamadaas u dhaxeeyaa siyaasiyiin mucaarad ah iyo xildhibaanno katirsan Baarlamaanka dowladda Federaalka.
Illaa sedax maamul goboleed ayaa kulamo aan kala joogsi laheyn kuleh magaalada Nairobi safiirrada dowladaha reergalbeedka ufadhiya Soomaaliya iyo madaxda hay'adaha Q.Midoobay kuwaas oo dhammaantood ku shaqeeya wadanka Kenya.
Madaxweynayaasha maamullada Puntland,Jubballanad iyo Galmudug ayaa shalay Nairobi kula kulmay Donald Yamamoto
oo ah safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Hoggaamiyaashan ayaa dowladda Mareykanka ugudbiyay cabasho ah in dhaqaalihii USA ay ugu talagashay Soomaaliya ay leexsadeen madaxda ugu sarraysa dowladda Federaalka.
Saciid Cabdullaahi Deni,Axmed Madoobe iyo Xaaf ayaa ka codsaday waxa loogu yeero Beesha Caalamka in ay si toos ah ula macaamilaan maamul goboleedyada arrinkaas oo banaanka soo dhigaya sida meesha ay uga baxday is aaminaaddii ka dhaxaysay hoggaamiyaasha dabadhilifyada ah ee shisheeyaha kusoo hoggaamiyay dalka Soomaaliya.